Tarot कार्ड चन्द्रमा: अर्थ र व्याख्या। जो Tarot कार्ड मा चन्द्रमा मतलब?
बौद्धिक विकास, Tarot
पुरातन प्रेतविद्यासम्बन्धी कार्डहरू ... धेरै को यो कला सपना मास्टर। कोसिस र हामी अहिले यो रहस्यमय अनुष्ठान को आधारभूत प्रविधी बुझ्न गरौं। र पनि त्यो यस्तो चेतावनी दिन्छ र ध्यान गर्न के सल्लाह रूपमा के, यो अर्थ prolapsed Tarot कार्ड चन्द्रमा थाहा छ।
Tarot के हो?
मानिसजातिको सधैं सबै अज्ञात beckoned छ र रहस्यमय। पुरातन समयका भएकोले मानिसहरू भविष्यमा आशा गर्न सक्छौं के थाहा चाहन्थे। सबै समय मा त्यहाँ भाग्य tellers, पूजाहारीहरू, shamans, witches, आफ्नो "ग्राहकहरु" सबै प्रश्नहरूको जवाफ तयार थिए। मान्छे ठूलो चासो Tarot कार्ड कारण। यो के हो? तिनीहरूले के हो? कसरी? यो एकदम गाह्रो यी प्राचीन वर्ण को व्याख्या को कला मास्टर कि ज्ञात छ र यो सबैको लागि दिइएको छैन। पहिलो उनीहरूले के हो आफूलाई लागि बुझ्न आवश्यक छ। Tarot - 78 कार्ड को एक डेक। तिनीहरूले XIV-xvi शताब्दीमा देखा पर्नुभयो। आज सामान्यतया प्रेतविद्यासम्बन्धी लागि प्रयोग गरिन्छ। डेक दुई समूह विभाजन गरिएको छ:
• मेजर Arcana। "ट्रम्प कार्ड" नाम। त्यहाँ 22 कार्डहरू छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै मौलिक रेखाचित्र छ।
• साना रहस्यमय। त्यहाँ 56 कार्डहरू छन्। कप, तरवार, Denaro, छड: 4-डी सूट विभाजित।
तुरुन्तै हामी चन्द्रमा प्रमुख Arcana बुझाउँछ कार्ड विचार गर्दै छन् कि उल्लेख गर्नुपर्छ। मिश्र, Tarot Visconti-Sforza, Marseilles, Tarot सवार-Waite र यति मा: त्यहाँ डेक विभिन्न भेरिएसनहरूमा छन्।
को रहस्यमय तस्वीर को रहस्य
यी प्राचीन रहस्यमय संकेत जहाँ गरे, ज्ञात छैन। Tarot कार्ड को मूल मा पौराणिक छन्। यसरी, ती एक अनुसार, यी वर्ण इटाली मा XV शताब्दीमा देखा पर्नुभयो। त्यसपछि तिनीहरूले एक लक्जरी हस्तनिर्मित कार्डहरू थिए। त्यहाँ अन्य, यी प्राचीन प्रतीक को मूल बारेमा कम plausible दन्त्यकथा छन्। तिनीहरूलाई को एक यी कार्डहरू जो आफ्नो मान्छे मिश्र बाहिर नेतृत्व प्यालेस्टाइनमा मोशालाई ल्याए छन् भनेर भन्छन्। तिनीहरूले यो देशमा त्यहाँ तन्त्रमन्त्रमा सूत्रपात को संस्कार बाहिर थिए जो प्राचीन मन्दिर, बताए। विशेष वर्ण कोठा को पर्खालहरु थिए। प्रत्येक रहस्य छुट्टै कोठा मा आयोजित थियो। र त्यहाँ कोठा को पर्खालहरु देखि 22 चित्रहरु पछि Tarot महान् Arcana को नाम दिए गरिएको छ। केही विद्वान पुरातन प्रतीक Kabbalistic मुद्दा को इतिहास मा पहिल्याउन। यसलाई जो थियो, कार्ड को मूल बारेमा विश्वसनीय स्रोतबाट संरक्षित छैन।
Tarot कार्ड द्वारा केही नियमहरू प्रेतविद्यासम्बन्धी
रहस्यमय वर्ण द्वारा पुरातन प्रेतविद्यासम्बन्धी सबै रहस्य बुझ्न छनोट गर्ने साईट, तपाईं धेरै होसियार र चिटिक्क हुन छ। आखिर, रहस्यमय अनुष्ठान गर्न अनपढ दृष्टिकोण गर्दा आफ्नो जीवनमा प्रमुख समस्या प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईं कार्ड निपटने को लागि केही नियम सिक्नुपर्छ:
• यहाँ प्रत्येक स्पष्ट प्रश्न सही ठोस जवाफ प्राप्त गर्न सक्छन्। हुन गर्दैन पङ्क्तिबद्ध पढेर सही त्रुटिहरू। तर यो सिस्टम प्रश्नहरूको गलत जवाफ दिने, छैन manipulated गर्न सकिन्छ।
• हामी स्पष्ट प्रत्येक कार्ड सम्बन्धित कीवर्डहरू जान्नु आवश्यक छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै अर्थ छ।
• Tarot कार्ड परिचय एक क्लासिक डेक सुरु गर्न राम्रो छ। यहाँ हामी "कुंभ को आयु" र सबैभन्दा लोकप्रिय भेरिएसनहरूमा दुई भेद सक्दैन "विश्वव्यापी Waite Tarot।"
• पैक मा कुनै नकारात्मक कार्डहरू छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई दयालु व्यवहार गर्न र समझ भाषा आवश्यक छ। नकारात्मक प्रतीकात्मक रूप कार्ड रोक्छ वा समस्या जोगिन कसरी निर्देशन दिन्छ।
• कार्ड कुनै पनि प्रश्न जवाफ दिन सक्छन्। तर यो "कुनै" "हो" जवाफ वा सक्षम हुन ताकि सेट गर्न आवश्यक छ।
• केवल निरंतर अभ्यास प्रेतविद्यासम्बन्धी राम्रो परिणाम दिन्छ। हुनेछ सुधार, मान्छे सही ढंगले वर्गीकरण व्याख्या गर्न सिक्न, यो बुद्धि र clairvoyance को च्यानल खुल्छ।
Tarot कार्ड द्वारा प्रेतविद्यासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू
भाग्य-पारंगत ... तिनीहरूले घृणा थिए तिनीहरूलाई मानिसहरू डराउँदैनन्, तर आफ्नो सेवा निरन्तर धेरै प्रयोग गरिन्छ उल्लेखनीय मान्छे। Cartomancy Tarot - केही रमाइलो र रोचक। occultism को adherents बीच शिल्प अन्ततः एक व्यक्ति खोल्न सक्छ "तेस्रो" आँखा पनि धारणा हो। अर्को शब्दमा, को भाग्य-पारंगत, बनाउन को Tarot मा वर्गीकरण, clairvoyant कौशल बन्नेछ। यी प्राचीन प्रतीक काम सबै आधारभूत सिद्धान्तहरू जाँच्न प्रयास गरौं। प्रत्येक सत्र - एक रहस्य हो। त्यसैले तपाईं के गर्न आवश्यक पहिलो कुरा - को प्रेतविद्यासम्बन्धी मा धुन छ। त्यसपछि मैनबत्ती र प्रकाश, लिन तालिका तल बस्न पूरा मौन पालन। कार्ड shuffling, को "ज्याकेट" माथि उल्टिनु र विघटित। कि पहिले, तपाईंले यसको जवाफ आवश्यक छ कि एउटा प्रश्न स्पस्ट बोल्नु् गर्न आवश्यक छ। प्रेतविद्यासम्बन्धी को सजिलो विधि: आफ्नो बायाँ हात संग डेक एउटा कार्ड बाहिर। यो तपाईंको प्रश्नको जवाफ हुनेछ। नक्सा ध्यान विचार गर्नुहोस्। यसमा छवि के संगतले तपाईं हो? उनको पछि माउन्ट उनको मा नम्बर, र राशिफल, याद गर्नुहोस्। त्यसैले, उदाहरणका लागि, चन्द्रमा कार्ड बाहिर गिरा तपाईं एक व्यक्ति कमजोर र touchy छन् भन्ने हो। तपाईं सजिलै, धोका किनभने credulity - आफ्नो मुख्य गुणहरू को अझै पनि एक। यो कार्ड तल "ज्याकेट" थियो? केही सतर्कता खतराहरूबारे तपाईं चन्द्र उल्टो। Tarot - 78 वर्ण को एक प्रणाली। केही मानिसहरू 22 मेजर Arcana द्वारा अनुमान गरिन्छ। तर तपाईं एक अधिक पूर्ण र विस्तृत प्रतिक्रिया सारा प्याक प्राप्त। निम्न विधि:3कार्ड को रकम। कि डेक shuffling र शीर्ष बाट प्रत्येक पंक्ति मा3वर्ण गर्न तल पङ्क्तिहरू सबै राख्नु भएको छ। यहाँ तपाईंले केही अन्य वर्ण को प्रभाव ध्यान गर्न आवश्यक छ। प्रमुख Arcana भाग्य को inevitability, यो अवस्थामा अभिनय एक archetypal शक्ति कुरा। एक माइनर Arcana मंत्री द्वारा वर्णन अवस्था बाहिर शरीरलाई मदत गर्नेछ। सही व्याख्या - कार्ड संग काम को एक प्रमुख सिद्धान्त। सिक्न यो व्यापक प्रशिक्षण द्वारा मात्र सम्भव छ। , लगनशील सावधान रहनुहोस्। र सबै तपाईं प्राप्त।
विवरण चन्द्रमा कार्ड
जहाँ अनुमान सुरु गर्न? निस्सन्देह, प्रत्येक कार्डको मूल्य एक अध्ययन। पुरातन प्रतीकात्मक रूप संग सम्बन्धित यो मौलिक नियम। क्षणमा हामी Tarot कार्ड चन्द्रमा रुचि छन्। एक गाढा पृष्ठभूमिमा यो जो माथि लटकी दुई टावर, को पक्ष मा देख्न सकिन्छ पूर्ण चन्द्र। ज्योति यसलाई वस्तुहरु र रात तुवालो मा expressive जगतले को रूपरेखा बनाउने, जताततै फैलिन्छ। प्रत्येक अन्य सामना टावर्स नजिकै पक्षले ब्वाँसो र कुकुर र चन्द्र मा गरजना बस्न। कार्ड को तल ताल, देखाउँदछ ढोंगी विशाल अक्टोपस वा केकडा देखि। पानी यहाँ उपस्थित छैन आकस्मिक छ। यो ज्वार अनुसार चंद्र चक्र संग छन् कि ज्ञात छ। तपाईं पनि भुइँमा चंद्र डिस्क को भाग झर्ने वर्षा याद गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू हाम्रो संसारमा आत्मा को वंश प्रतीक। धेरै Tarot चन्द्रमा विचार गर्दा असामान्य तस्वीर हामीलाई अघि खुलेको छ। यसलाई अर्थ धेरै रोचक छ। यसलाई निम्न अध्यायमा छलफल गरिनेछ।
मूल्य कार्ड Luna
चन्द्र नक्शा विचार गर्दा दुःखी विचार आफ्नो टाउको मा छिर्न। गाढा रंग सबै। चन्द्र मा गरजना जंगली जनावर, फिक्री र डर को एक राज्य मा शुरू गरिएको छ। पानी बाहिर एक विशाल अक्टोपस, निराशाको एक प्रतीक हो। यसको बलियो नेटवर्क मा एक पटक, तपाईं शायद कहिल्यै मुक्तिको तरिका पाउनुहुनेछ। तर सबै कि खराब छैन यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा। यहाँ ठीक Tarot कार्ड चन्द्रमा व्याख्या गर्न कसरी: यसको मूल्य वातावरण (छिमेकी कार्ड) को परिदृश्य मा निर्भर गर्दछ। नकारात्मक पैदावार स्याल (escapism), Owls (अत्यधिक suspiciousness), र यति मा। यो 'राम्रो' छिमेकी: माछा (ठूलो बचत), चन्द्र (परिवार) र अन्य। कार्ड को उपस्थिति चेतावनी रूपमा देखेको हुनुपर्छ। यो किनभने सबैले चन्द्र ज्योति भ्रामक देखिन्छ मान्छे, आफ्नो विरोधीको हल्कासित नलिनुहोस् सम्भव छ। शत्रुहरू चारैतिर पर्खाइ मा झूठ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आत्मसंयम गुमाउन छैन महत्त्वपूर्ण छ, तर नआत्तिनुहोस्। यस महिना को को नक्शा आफ्नो इच्छा र भावना मा दिन छैन, आफ्नो आत्मा मा rein गर्न भनिएको छ।
सोझो स्थिति कार्ड को व्याख्या
प्रेतविद्यासम्बन्धी मात्र महत्त्वपूर्ण आपसमा प्रभावित कसरी बुझ्न, तर पनि खसेको तलमाथि तस्बिरहरू व्याख्या गर्न सक्षम, पुरातन प्रतीक को अर्थ थाहा छ भने। आखिर, को कार्ड मूल्य Tarot चन्द्रमा अक्सर ठीक वा पतन रूपमा उल्टो कि निर्भर गर्दछ। हामी कार्ड को दुई पक्ष को व्याख्या आपसमा विरोध भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, सोझो स्थिति प्रतीक सकारात्मक पक्षहरू, अन्य पक्ष संकेत भने, नियम रूपमा मात्र नकारात्मक तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो पनि चन्द्रमा कार्ड लागू हुन्छ। अस्थिर, खतरनाक, लामो यात्रा, अनिश्चय,: को अगाडी स्थिति, यो निम्न अर्थ एक रचनात्मक संकट, को सम्बन्ध मा ठहराव, व्यर्थमा भ्रम।
कार्ड को व्याख्या तलमाथि
हामी पुरातन प्रतीक को उल्टो पक्ष के भनौं? कार्ड Tarot चन्द्रमा को मूल्य को उल्टो फारममा के हो? को meanness र छलछाम, जीवन, व्यर्थ कार्यहरू, falsehood गलत, सत्य दाँया भेद गर्न नसक्नुको संग dissatisfaction: निम्नानुसार यसलाई व्याख्या छ उल्टा।
मानव स्वास्थ्य को विवरण र चन्द्र नक्सामा व्यक्ति
fortuneteller अक्सर भविष्यमा भविष्यवाणी गर्न मात्र होइन, तर पनि जसलाई पङ्क्तिबद्ध गरेको गर्न व्यक्ति बताउन सोधे। चांद को व्यक्तिगत नक्सा बारेमा हामी के भन्न सक्छौं? उहाँले आफ्नो गुण, उपस्थिति, स्वास्थ्य कस्तो छ? Tarot मा चन्द्र रहस्य, डर, अनिश्चितता छ। कहिल्यै केही छैन कालो रंग मा सबै, स्वभाव अक्सर melancholic हेर्न, आफूलाई पक्का निराशावादी, खतरा doubted, डरलाग्दो: र यो गिर कसलाई मा व्यक्ति, निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिँदैन। एकै समयमा, यस्तो व्यक्तिगत clairvoyance केही डिग्री अधिकार हुन सक्छ। उहाँले एक ज्वलन्त कल्पना छ। उहाँले, impressionable touchy, नरम छ। नियम यस्ता मानिसहरू अक्सर आफूलाई कला को सेवा गर्न, टेलिभिजन वा इन्टरनेट को क्षेत्र मा काम समर्पित। तिनीहरूमध्ये धेरै romantics र dreamers छन्। तथापि, अक्सर आफ्नो विचार र unfulfilled बाँकी छन्। तिनीहरूले अक्सर नैतिक समर्थन आवश्यक छ। साथै, यो आत्महत्या गर्न आफ्नो झुकाव उल्लेख गर्नुपर्छ। राम्रो स्वास्थ्य, त्यस्ता मानिसहरूलाई घमण्ड गर्न सक्दैन। तिनीहरूले विभिन्न मानसिक रोग अधीनमा छन्। तिनीहरूमध्ये धेरै alcoholics र अनुभव दबाइ नशेडी छन्। जुनूनी डर, phobias, चिन्ता, hypochondria, स्नायु breakdowns र निराशा - आफ्नो स्थिर साथीहरू। तर तिनीहरूलाई मात्र होइन मानसिक रोगहरूबाट विकास। महिला अक्सर अनियमित menstrual चक्र छ। तिनीहरूलाई यसको लागि सबैभन्दा खतरनाक रोग - क्यान्सर।
रोमान्टिक सम्बन्ध मा Tarot कार्ड चन्द्रमा
मान्छे धेरै धनी को भित्री संसार। तिनीहरूले बौद्धिक, राम्रो-पढ्न, शिक्षित हुन गर्छन। मा शास्त्रीय संगीत र विश्व साहित्य रुचि। यस महिना को को नक्शा तिनीहरूलाई मा सूक्ष्म रोमान्टिक प्रकृति प्रकट गर्छ। तिनीहरूले ठूलो भावना सक्षम छन्। तर तिनीहरूलाई एउटा सम्बन्ध बलियो छैन भन्न सकिन्छ। जोडीलाई मा सम्बन्ध अक्सर किनभने प्रत्येक अन्य, आधारहीन डाह, अत्यधिक touchiness मा साझेदार को अनिश्चितता को deteriorate। पतन गर्ने कार्ड चन्द्रमा एक मानिस, प्रसन्न साथ बाँच्न। तर सबै मतभेद बसे गर्न सकिन्छ जब दुवै साझेदार दृढ इच्छा।
के चन्द्र कार्ड थियो भने?
र यो पुरातन रहस्यमय साइन ड्रप गर्ने मान्छे को लागि अब केही सुझावहरू। को Tarot चन्द्रमा मा, माथि उल्लेख गरिएझैं एक निश्चित डर, अनिश्चितता, वर्ण को अस्थिरता छ। सोझो मानिसको स्थिति, यो लुकेको समस्याहरूको उपस्थिति संकेत वा लुकेर आक्रमण शत्रुहरू मा प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यो चरित्र गिरा भने, नडराऊ। तपाईं होसियार हुनु आवश्यक छ भनेर बताउन भाग्य को एक चिन्ह रूपमा विचार गर्नुहोस्। इच्छाधारी छैन सोचाइ। मानिसहरूलाई ध्यान हुन। तिनीहरूलाई केही आँखा तपाईं चापलूसी, र षड्यन्त्र पछि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आतंक टक्कर छैन लायक छ। शान्तपूर्वक र निर्धक्क भई व्यवहार। डर हटाउन, आफू र आफ्नो बल मा विश्वास गर्छन्।
हामी Tarot कार्ड संग काम को आधारभूत नियमहरू ढाकिएको। यो रोमाञ्चक अनुभव जो कोहीले मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि मतलब prolapsed कि चन्द्रमा Tarot कार्ड फेला परेन। तपाईं अनुमान गर्न सिक्न चाहन्छन् भने, सिद्ध गर्न सिक्न सबै आवश्यक वर्ण को मूल्य।
Wands Tarot राजा: सम्बन्ध मा मूल्य
मायालु Tarot कार्ड: मूल्य संयोजन
घरमा Ivana Kupala मा Guessing
के कार्ड "2 कप" मूल्य छ? Tarot: व्याख्या
Arcana Tarot: मान। को Tarot प्रमुख Arcana। Arkan - छ ...
Mareblue Resort4* (कोर्फू, ग्रीस) फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
Eco-छाला देखि कवर: कार मालिक को समीक्षा
सामाजिक मनोविज्ञान र यसको समस्या विषयको
नस्ल - छ मात्र होइन अयस्क वा कुकुर, तर पनि अरू केही
एक जन्मदिन पार्टी, एंटोन मना गर्दा?
विन्डोजसँग समस्याहरू: कसरी कार्यपट्टीमा भोल्युम प्रतिमा फर्काउँछ
रिसेप्शन डेस्क वरिपरि ठाउँ बनाउने
कम्पनीहरु को समूह "एक्सेलसियर": कर्मचारी समीक्षा
दिमित्री Malyshko: तस्बिर, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन